गाविस सचिवले कति कमाउला ? ऋषिराम त्यस्ता गाविस सचिव हुन् जसले २६ करोड कमाए, ‘जहाँ सरुवा त्यही घडेरी – Upahar Khabar
गाविस सचिवले कति कमाउला ? ऋषिराम त्यस्ता गाविस सचिव हुन् जसले २६ करोड कमाए, ‘जहाँ सरुवा त्यही घडेरी
प्रकाशित मिति : ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार १९:२५ May 20, 2020
काठमाडौं – गाविस सचिवका रूपमा सेवा प्रवेश गरेर अधिकृतबाट अवकासप्राप्त सरकारी कर्मचारीले जागिरे अवधिमा कति आर्जन गर्न सक्लान् ? सीमित कमाइबाट आफ्नो र परिवारको आवश्यकता पूरा गरेर इमानका साथ कमाइएको पैसा बचत गर्न निकै कठिन नै छ ।
तर स्याङ्जाबाट गाविस सचिवमा जागिर सुरु गरेका एक व्यक्तिले आफ्नो जागिरे अवधिमा २६ करोड कमाई गरे । तर त्यसमध्ये १७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर सम्पत्तिको भने स्रोत नै खुलेन । भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति हुन टोखा नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत ऋषिराम अर्याल । आफ्नो जागिरे अवधिमा अर्यालले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिएपछि मंगलबार उनीसहित उनका छोरा, श्रीमतीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए । कोइरालाका अनुसार, गैरकानुनी ढंगले आर्जित १७ करोड ८३ लाख ४१ हजार ५७९ रूपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अर्याल ०३९ साउन १ बाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए । सुरुमा उनको पोष्टिङ स्याङजामा भयो । त्यहाँ उनको सुरुवाती भूमिका गाविस सचिवको थियो । सरकारी सेवाको आखिरीमा उनी टोखा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत थिए । निजामती सेवामा ३६ वर्ष बिताएका उनी यहीँबाट अवकास भए । जागिरे कालखण्डमा उनले देशका विभिन्न भागमा काम गर्ने मौका पाए ।